Archive du 20171012
Jean Nirina – HAFARI Malagasy « Tsy hamaly faty velively aho »
Hiverina amin’ny asa niantsorohany toy ny teo aloha ny fikambanana HAFARI Malagasy. Omaly no nampahafantaran’ny filoha nasionaliny Rafanomezantsoa Jean Nirina tamim-pomba ofisialy izany ka anisan’ny laharam-pahamehana ho azy ireo ny fiarovana ny zon’olombelona.
Diso vanim-potoana !
Io indray ianao Rabekonetaka ilay tsy mahay mifidy ny vanim-potoana hitenenana sy tsy misaina akory izay zavatra resahina an !
Tsenan’Anosibe Niakatra 150 Ar isan-kilao ny vidim-bary
Velon-taraina amin’ny fiakaran’ny vidim-bary eny amin’ny tsenan’Anosibe avokoa ny ankamaroan’ny mpanjifa amin’izao. Tao anatin’ny tapa-bolana monja mantsy izay dia nahitana fiakarany 150 Ar isan-kilao ny vidim-bary eny amin’ireo mpambongady ka ny vary gasy mena sy ny makalioka no tena voakasika.
Vono olona teny Ambohitrarahaba Ankizy 15 sy 13 taona no tompon’antoka
Zazavavy vao 15 taona sy zazalahy 13 taona no voasambotra noho ilay raharaha teny Ambohitrarahaba nisian’ny famonoana tovolahikely iray 12 taona tamin’ny fomba feno habibiana ny talata lasa teo satria nofatorana ary notapahina tamin’ny antsy sy famaky ny lohany, ary nesoriny voamasony roa.